UDani Carvajal Ingane Yomlando Plus Untold Biography Amaphuzu -Ukuphila Ngokuvamile
Ikhaya STARS E-EUROPE UDani Carvajal Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
UDani Carvajal Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza indaba egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "I-Kiwi Head". Indaba yethu ye-Dani Carvajal Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi we-OFF-Pitch (angaziwa kakhulu ngaye).
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokubukeka kwakhe kwe-beardy nokuhlakanipha kwamasu ngesikhathi esifanele. Kodwa-ke, abalandeli abambalwa kuphela abanolwazi oluningi nge-Bio Dani Carvajal okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
UDani Carvajal Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isiqalo sokuphila
Daniel "UDani" UCarvajal Ramos wazalwa ngosuku lwe-11th lukaJanuwari 1992 unina, uLola Ramos nobaba, uMariano Carvajal eLieganés, eCentral Spain. UDani wazalwa eyiNdodana yaseSpain ehlanzekile kanye nendodana yaseMadrid.
Wakhulela edolobhaneni laseLeganés laseMadrid kanye nodadewabo uPatricia Carvajal. Emuva ezinsukwini lapho uDani esengumntwana, abazali bakhe babezomdonsela eceleni bese beya eSantiago Bernabeu. Uphinde, ubaba wakhe wayezomphakamisa emahlombe abo ukuze ajabule ngokugubha imigomo. Yileyo ndlela ayithandana ngayo nomdlalo.
Okokuqala, uDani wathola uthando olujulile nolunaphakade lwebhola le-Real Madrid okuyinto eqenjini elisekela lapho eseyingane. Ukudlala ibhola kanye nabangani bobabili esikoleni nasemaphakathini wendawo nakho kwaba yinto yokuzilibazisa evamile kaDani. Uthando lwakhe lwebhola lwaholela kubazali bakhe bevusa indodana yabo yodwa ohlwini lweqembu le-Real Madrid elisha, okwamnikeza isigaba esifanele sokuthuthukisa amakhono akhe. Ngezansi uDani omncane ekhanda le-Real Madrid Academy.
UDani Carvajal Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphakama Ekudumeni
Ujoyine uhlelo lwentsha yaseReal Madrid njengomuntu oneminyaka engu-10 ubudala futhi waqhubeka ekhuphuka futhi ehamba ngendlela yakhe. Omunye umzuzu okhumbulekayo awubambe kuze kube yilolu suku wukuthi wathola isikhalazo emcimbini osemthethweni wokuqeqeshwa kwe-Real Madrid eValdebabas. Esithombeni ngezansi, Alfredo di Stefano, omunye wabadlali abakhulu emlandweni wegeyimu wabeka isipho kuDani Carvajal omncane ngenxa yomsebenzi wakhe onzima ekubeni umdlali omuhle kakhulu weqembu lakhe.
UDani osemncane waqhubeka nokuphuma eqenjini kuze kube yilapho efika eReal Madrid Castilla (ithimba leReal Madrid) e-2010 lapho eyinkosikazi yeqembu. UDani wadlala imidlalo yakhe ephezulu ye-38 esiza ithimba le-Real Madrid B libuyele emuva Segunda División emva kweminyaka emihlanu engekho.
Just like Juan Mata owafika kulesi sigaba, uDani akakwazi ukuqhubeka futhi angene eqenjini lokuqala laseMal Madrid wamenza wafuna isiphephelo kwenye iklabhu. I-Real Madrid idonsa ngesiteleka ithimba layo elisha leLeverkusen ngesigatshana esincane esithengi sokuthenga. Ngesikhathi eseLeverkusen, umsebenzi weCarvajal waqala ukuxoshwa kweMal Madrid.
UDani wasiza iBayer okwesithathu eBundesliga, kanye nephuzu elilodwa ngemuva kweDortmund esekelwe okwesibili. Ekupheleni kwenkathi, iSpain yavotelwa njengenye yezinsizakalo ezingcono kakhulu kuleli qembu. Ngalesi sikhathi, i-Real Madrid yaba nomona futhi yayifuna indoda yabo ibuyele emuva.
Imizamo kaDani ayizange ibonakale kwezinye amaqembu aseYurophu. Ngemva nje kokuba ifasitela lokudlulisa liphinde livuliwe, iMadrid ngokushesha yashaya futhi yathenga umkhiqizo wabo omusha othembisayo.
Lapho ebuyela eSigodini-dolobha, uDani Carvajal ujabule ngethuba lakhe ekugcineni enikezwa ukuba abe neqembu lenhliziyo yakhe. Ngenkomfa yakhe yezingqungquthela zokuqala, leli talenta lathi wayeyikho "Umuntu ojabule kakhulu emhlabeni". Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
UDani Carvajal Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Ubudlelwano
Ukuzibandakanya kakhulu ekwenzeni ibhola akuzange kwakhiwe izindonga ezungeze inhliziyo kaDani Carvajal. KwaDani, amandla amakhulu okuwa othandweni aqala ezinsukwini zakhe e-Real Madrid Castilla. Ngaleso sikhathi, wathola uthando lokuqala noMarta Morales olufanekiselwe ngezansi.
UMarta wayekade ehamba nayo yonke insizwa yakhe. Nguye owasekela lapho ephuma eJalimane unyaka. Ngeshwa, ibanga lithinta ubudlelwane babo njengoba bekholelwa ukuthi uMorales wayefunda esikoleni ngaleso sikhathi futhi wayekwazi ukulahla izifundiswa zakhe ukuba njalo abe nendoda yakhe. Ngeshwa, ngaphambi kokuba abuyele e-Real Madrid, bobabili abathandi banquma ukuhamba ngezindlela.
Phakathi naleso sikhathi esasiyingxenye yokuqala ye-2014, uDani waqala ubudlelwane obufushane (amasonto ambalwa) nomunye udade ogama lakhe linguMarta Garcia Pavon. Kuye (okufanekiselwa ngezansi), wathola induduzo ngaphandle kokukhathazeka ngokomzwelo.
Naphezu kokuba noMarta Pavon, uDani waba nomuzwa wokuthi wayekhona ton of uzizwa ngo-Ex-girl wakhe osekudala, uMartin Morales. Lokhu kubangela ukungathandeki kuPavon okwenza ukuba aqale ukuhlukana nokuqhubeka. Ukuhlukana noPavon kwasusa isithakazelo sikaDani sokubuyela ebuhlotsheni bakhe bangaphambilini. Ekugcineni wabuyela kuMarta Morales, lona wesifazane inhliziyo yakhe ingokwakhe.
Bobabili uDani noMarta kwakudingeka basebenze kanzima ukuze baqiniseke ukuthi abaphindi amaphutha adlule. Ngalesi sikhathi, babevulwe kakhulu futhi baqondana komunye nomunye. Kuphela isikhathi esithile ngaphambi kokuba bashade.
UDani Carvajal Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Komndeni
Kusukela ngesikhathi, uDani uye waqonda njalo ukubaluleka komndeni futhi asaqhubeka. Ukuze abonise ukuzibophezela kwakhe, uthola njalo umzuzu ophelele wokuphumula nabazali bakhe ngemva kokubukela imidlalo yakhe eBernabeu. Ngaphansi kweDani ukuphumula ngemuva kwemidlalo noyise (uMariano), umama (Lola) nodadewabo (Patrica).
Njengoba kubonisiwe esithombeni esingenhla, uDani uhlale exhunywe kubazali bakhe kanye nomntakwethu. Futhi, ukujula kothando lwakhe ngabazali bakhe kubonakala sengathi kubonakala ngesikhathi ehlanganyela i-Champions League izinkumbulo nomama wakhe nobaba wakhe omkhulu, uMariano.
UDani Carvajal Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Personal
UDani unesimo sangaphakathi sokuzimela esenza ukuba enze intuthuko ephawulekayo kokubili ekuphileni kwakhe komuntu siqu nochwepheshe.
UDani unamandla okuhola indlela. Ukwenza izinhlelo eziqinile nezengqondo zomsebenzi wakhe nomndeni wakhe. Nakuba engakashadi njengoba sibhala lesi sihloko.
UDani unamandla okufunda emaphutheni akhe njengoba ehlonishwa ebuhlotsheni bakhe noMarta Morales. Ukukwazi kwakhe ukufika phezulu kuphinde kusekelwe ekuhlangeneni nakho kwakhe nobuchwepheshe.
UDani akagcini nje ngokugxila emhlabeni jikelele, unekhono lokusebenzisa okuningi kulo.
UDani ulindele ukuthi ubani obheke njalo kunomuntu obi kakhulu. Ngokuvamile okuthiwa a I-Kiwi Head, he angathande cishe yonke into ngesikhathi esithile.
Izinto azithandayo zihlanganisa; Intombi yakhe, umndeni, isiko laseSpain kanye nobuciko bekhwalithi.
UDani Carvajal Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isimo Senhliziyo
Real Madrid sasizizwa buhlungu enkulu ngemuva kwemibiko sekukhona ekhombisa kwesokudla emuva Dani Carvajal Ngangimbheka njengomuntu okumelwe zigwenywe kusukela Real Madrid squad ngenxa senhliziyo.
Ngokusho kweSpanishi I-Marca, isimo senhliziyo simvimbela ngaphandle "Okungenani izinyanga ezimbili." Phakathi nalesi sikhathi, uDani wayengavunyelwe ukuzivocavoca. Njengoba umbiko wezokwelapha uthi, uDani wathola ukuthi une-a "I-viral pericardium infection" okuyinto ukuzwa ukuthelelekakunzima ukwelapha. Ngenhlanhla ngaye kanye nabalandeli bakhe, inhliziyo yakhe yaphulukiswa.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeDan Carvajal Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
vannyhenrico - December 16, 2019 0
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Bojan Krkic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Mashi 11, 2018